🥇 ▷ Sida loo galo oo loo furo meelaha mugdiga ah Qeybta 2 ✅
Sida loo galo oo loo furo meelaha mugdiga ah Qeybta 2
Waxaan kuu sheegnaa sida loo galo oo loo furo meelaha mugdiga ah Qaybta 2. Aagagga Madoow waa aagagga PvP ee Qeybta 2. Waxay ku yaalliin meela ka mid ah dhammaadkii dagaallada. Halkani waa meesha aad ka sameyn doontid dillada, khiyaanooyinka iyo khiyaanada ciyaartoydanada badankood.
U maleyntii ugu horreysay waxay ahayd in furitaanka aagga mugdiga ah ee ugu horreeya uu xiriir la leeyahay heerka dabeecadda. Si kastaba ha noqotee, tani waxay u rogtay inay been tahay. Intii lagu guda jiray labada khiyaano, Dark Zone East waxaa lasiiyay marin helitaan kadib markay dhammeystirtay howlgalka Xarunta Ganacsiga ee Jefferson. Waxaan u maleynaynaa inay tani sidoo kale run noqon doonto nooca ugu dambeeya ciyaarta. Waa inaad ahaato heerka 5aad meeshaas, laakiin runtii micno malahan. Xitaa haddii aad heerka kor u qaadday adigoo sameynaya waxyaabaha sare, ama aad ka soo dhacday qalooca adoo diirada saaraya kaliya howlaha muhiimka ah, waxaad wali heli doontaa furayaasha aagga PvP oo qayb ka ah horumarka sheekada.
Xusuusnow mar haddii aad gasho DZ, dhammaan sharadyada waa la gooyaa. Qof kasta wuxuu noqon karaa cadow. Haddii aad ciyaartey ciyaartii ugu horreysay, sharciyo isku mid ayaa lagu dabaqayaa. Iska ilaali ajnabiga, isha ku hay wax kasta inta lagu jiro saarista qalabka faddaraysan oo weligaa qofna si buuxda u aamminin. Waa duni aad u adag aagga mugdi ah, qof walbana wuxuu raadiyaa inuu helo dhaqso lacag.